3M Curtain Garland ၀ င်းဒိုးတွင် USB String LED Lights ကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်ပြီးအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မဆောင်ပါနှင့် WoopShop®
Wattage 3M x 3M 3M x 2M ၃ မီလီမီတာ x3M
ပူနွေးသောအဖြူ / 3M x ကို 3M ပူနွေးသောအဖြူ / 3M x ကို 2M ပူနွေးသောအဖြူ / 3M x1M အဖြူ / 3M x ကို 3M အဖြူ / 3M x ကို 2M အဖြူ / 3M x1M Multi-color / 3M x 3M Multi-color / 3M x 2M Multi-color / 3M x1M
3M Curtain Garland ၀ င်းဒိုးတွင် USB String LED Lights သည်အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် - အဖြူရောင် / 3M x 3M backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အရောင်: White, Multi, ပူနွေးသောအဖြူရောင်
ဦး ခေါင်းနံပါတ်:> 200
အင်္ဂါရပ်များ: မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်, Dimmable
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: CCC, CE, ROHS
အခါသမယ: အိပ်ခန်း, ကုလားကာပန်းကုံး
အတန်းအစားအဂင်္လိန်ကသင့်ကိုရေခဲပုံးထဲ၌ ၀ ယ်ယူရန်အကြံပေးသည်။
အစဉ်အလာအားဖြင့်ပြည့်စုံရလိမ့်မည်။ ငါ့ကို encantan !!
ပန်းကုံးအလွန်အေးမြပါ! မင်းရဲ့ပိုက်ဆံအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပါ။ အလွယ်တကူကုလားကာများအတွက်ချိတ်နောက်ကွယ်မှဆွဲထား။ အရှည်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်၊ ဝါယာကြိုးများပေါ်ရှိမီးများ၊ သင်ဖြောင့်နိုင်သည်။ ဘက်ထရီမရှိဘဲအဝေးထိန်းခလုတ်သည်ပတ် ၀ န်းကျင်လိုအပ်သည်။ အရာအားလုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်, အလွန်စိတ်ကျေနပ်မှု။ အမိန့်ကို ၃ ပတ်အတွင်းမှာယူခဲ့သည်